I-Boam Boilers, ii-Boilers zegesi, i-Boiler Zamanzi ashushu- iGoodao Technology Co, Ltd.
Amava eminyaka engama-50 'yokuBilisa iBoiler
I-Biomass Wood Boiler yeoyile yeoyile
I-Boiler yeoyile eshushu isetyenziswa kwi-Textile, ukutya, irabha, iphepha, iplastiki, iinkuni, izinto zokwakha njl uphawu: Isakhiwo esi-1 sisonke sinengqiqo kwaye sihambelana, kulula ukusifaka. Uyilo olongeziweyo, Isakhiwo esipheleleyo 3. Umjikelo wamanzi olula, ulwakhiwo olufanelekileyo lweengcinezelo, uqinisekisa umgangatho wamanzi, ukhuselekile ukuba usebenze.
I-SHX ejikelezayo Ehambisa amanzi kwiBoiler
Intshayelelo: Njengohlobo olutsha lomsebenzi ophezulu ovuthiweyo ngetekhnoloji yamalahle ecocekileyo ephantsi. Itekhnoloji yokujikeleza kwebhedi ejikeleze amanzi (CFBC) ayifani nabanye kuba inezinto ezahlukileyo ezingaqhelekanga. 1. Umbhede ojikelezayo owenziwe ngesangqa ngowokukhanya kobushushu obuphantsi, ngenxa yoko iitrogen oxides ezikhutshwayo ze-boiler zisezantsi kakhulu kunombane wamalahle-umgubo werhasi, kwaye ezo boiler zinokuthi ngqo zichithe ixesha lokudalwa. Ukujikeleza i-boiler yebhedi ejikeleze amanzi nge-desulfuriza ephezulu ...
I-Autoclave-Idumileyo esetyenzisiweyo kwiZityalo ze-ACC, kuMatshini weFlyash, kwiZinto zokwakha, njlnjl. .. Isici 1, imveliso yokuqala yasekhaya yomzi mveliso oyingcali. 2, imveliso umgca ibandla, ukuwelda zonke esizisebenzelayo, umgangatho kunye nozinzo. 3, onke amacandelo oxinzelelo 100% X-ray ukufunyanwa umboniso, iindlela ubhaqo phambili. I-4, imveliso njengomzi-mveliso wonke, indawo eqhubela phambili nenesiseko esifanelekileyo, ixesha lokufaka ixesha elifutshane, iindleko zotyalo mali ziphantsi. I-5, ifakwe ngokupheleleyo, ngencwadi yemigaqo ...
Intshayelelo: Izixhobo zoxinzelelo lwenqanawa zidlala indima ebalulekileyo kwishishini le-petrochemical, kwishishini lamandla, kuphando lwezenzululwazi nakumacandelo omkhosi, njl njl. Ukongeza, ikwaxhotyiswe ngezixhobo zokhuseleko, imitha kunye nokhuseleko lwangaphakathi ngenjongo yokukhusela. Uxinzelelo lweVessel enguPhambili koDonga oluSebenzayo uXinzelelo lwe-Meta1.0Mpa amaqondo amaTshisa angama-250 ℃ S ...
Intshayelelo: Uxinzelelo lweVessel enguNdoqo wokuSebenza oPhezulu kwiTafile Uxinzelelo1.0Mpaqondo Ubushushu bamaqondo angama-250 ℃ Ukufudumeza Amanzi 179 ℃ Ukufudumeza Amanzi: kwiqondo lokushisa 90 ℃ ； Ukukhupha amaqondo obushushu ali-140 ℃ Isici Ngokuzenzekelayo ukusebenza kunokuqikelelwa ngenkqubo yolawulo lwedijithali yokulawula inkqubo ekhethiweyo yolawulo lwenkqubo elungileyo. , Ukufakelwa kwento yokufakelwa kwezinto kunokufezekiswa kwexesha elitshintshiweyo ngokuzenzekelayo ukuze kwandiswe ubomi bezinto ezizezinye ngogutyiso oluzenzekelayo ngelaji ezenzekelayo ...
Umyili wezobuchwephesha weBoiler
I-Xuzhou Double Rings Machchan Co, Ltd yeGolden Moon Group, ifektri ye-biomass boiler, i-Coal Boiler, i-oyile yegesi ye-oyile, i-Thermal I-Boiler yeoli, ukujikeleza kweFuidised Bed, Autoclave, Pressess Vessel, Electric Steam Boiler, Steam & Umbhobho wamanzi ashushu kunye noMatshini weBoiler .
Iqela lethu ligubungela ummandla weemitha zesikwere ezingama-950000. Indawo yeMveliso yeMveliso malunga ne-50000 yeemayile. Ungumnikazi weenkonzo ezigqityiweyo zoPhando lwezeNzululwazi, ukuThengisa, ukuThengisa kunye nokuFakelwa.Ubuchwephesha bobuchwephesha kunye noMatshini wokuhlola ukuze kuqinisekwe ngemveliso esemgangathweni.
IZIGANEKO NAMATYALA EMveliso
XUZHOU Double amakhonkco OOMATSHINI CO., LTD
Ukuhambisa i-boiler kunye nokupakisha
Ukujikeleza i-Boiler yebhedi ejikelezayo ejikelezayo （I-CFB） Ukufakwa --- 45I-5.3 Mpa ejikelezayo Ehambisa amanzi kwiBhedi yeBhedi. Emva kokuchitha unyaka wonke we-2016 ukuxoxa, i-Tiler engu-45 T 5.3 ye-Mpa ejikelezayo ejikelezayo yasayinwa isivumelwano kwaye yagqiba ukuvelisa. Ngoku, iSetyhula ...
I-DZL Chain Grate i-Boiler ye-boiler
I-1T DZL yeChain Grate Steam ibhoyila yokugqiba ukufakela Emva kokuchitha iintsuku ezingama-7, abasebenzi bokufaka bagqibile ukufakela i-1T DZL Chain Grate Steam Boiler ...
Ukuthengisa kunye nokuhambisa ngenqwelomoya boilers
Ukuhanjiswa kweBoiler --- SZL 10Ton Amanzi e-Tube Amalahle aBhiniweyo aManzi aya kuVuselelwa kwisiza seTekhnoloji ye-Indonesia Xa i-Indonesia ithenge i-6 Ton Steam Boiler yethu yokuqala, yayiyi-boiler yabo yesibini ye-Ton Water Tube Coal Fired Steam Boiler. Kwingxoxo yobuhlobo, t ...